Mixer mixer ao an-dakozia miaraka amin'ny Nickel borosy mibontsina
Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / Kitapo mixer amin'ny famaohana an-dakozia miaraka amin'ny Nickel borosy mibontsina
Ity faucet an-dakozia an-tsokosoko ity miaraka amin'ny natiora miovaova dia tena tandindon'ny fahamendrehana. Izy io dia manequin faucet ao an-dakozia tena miavaka ary heverina ho iray amin'ireo endriny manokana. Ny vokatra koa dia misy sprayer misintona. Mety misy ihany koa mitantana ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny cartridge ceramic. ity faucet ity dia misy fisorohana sy fiarovana tanteraka amin'ny famoahana rano. Ny faucet an-dakozia koa dia natsangana tsotra ary mety ho matanjaka be.
Manome kalitao avo sy kanto, ity faucet milentika tokana ity dia mitondra fitohizan'ny famolavolana glossy any an-dakozia. Ny fifampiraharahana amin'ny levera contoured dia manome fitantanana tsotra ny mari-pana amin'ny rano sy ny fihenjanana, fa ny sprayhead manintona miloko mifanaraka amin'ny loko dia manome fahalalahana ho an'ny asa fanadiovana isan-karazany. Amin'ny tsindry bokotra iray, ny sprayhead dia miova avy amin'ny renirano mandeha anaty rivotra mankany amin'ny tsifotra matanjaka.
Ny fantsom-panafody roa-miasa dia mamela anao hiova avy amin'ny renirano mandeha amin'ny rivotra.
Ny valizy kapila vita amin'ny keramika dia mihoatra ny takiana amin'ny faharetan'ny orinasa, miantoka fahombiazana matanjaka amin'ny fotoana rehetra.
fantsom-pifandraisana milamina sy fantsom-baolina mitambolimbolina dia mahatonga ny sprayhead hilatsaka ho tsotra sy fanampiny izay azo ampiasaina.
Safidy sprayface ny gorodona mora hadio izay mahazaka fananganana mineraly.
Ny fifanarahana arara-maso tokana dia mahitsy hampiasaina ary manamora ny fanitsiana ny mari-pana amin'ny rano.
Ny fampahatsiahivana ny mari-pana dia mamela ny faucet hovelomina sy ho faty amin'ny mari-pana napetraka nandritra ny fampiasana mialoha.